Antananarivo, 13 Jolay 2021. Mba hampiroboroboana ny famatsian-drano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana eny anivon’ny toeram-pianarana, sy hitondrana vahaolana hiadiana amin’ny Covid-19 ihany koa, dia sekolim-panjakana mihoatra ny 19 000 no hahazo ireo fitaovana fanasan-tànana tsy ilàna fifampikasohana (DLM). Raha atotaly dia mpianatra mihoatra ny 3 750 000 no hampiasa ireo fitaovana ireo, fanomezana izay tafiditra ao anatin’ny tolo-tanana fanampiny nataon’ny Fiaraha-miasa manerantany ho an'ny Fanabeazana, avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena.
Ny sekoly amin’ireo faritra 10 natao laharam-pahamehana sy amin’ireo tanàn-dehiben’ny distrika anisan’ny be mponina indrindra no hisitraka DLM tsy ilàna fifampikasohana 60 litatra iray avy, na 20 litatra 3 avy ary savony iray baoritra. Ambonin’izany dia homena peta-drindrina fanentanana marobe momba ny fidiovana sy ny fihetsika ara-pahasalamana tokony atao ireo vondron’ny mpanabe, mba ho fanentanana sy fanoroana any amin’ny sekoly iasany tsirairay. Noho izany dia Cisco miisa 114 ao anatin’ny faritra 22 no voakasik’ity fanampiana ity, izany hoe sekoly fanabeazana fototra miisa 17 000, sy sekoly ambaratonga faharoa miisa 1 600 ary lisea mihoatra ny 360.
Nisy ny lanonana fanamarihana ny fanomezana ny fanampiana ho an’ireo sekoly rehetra eto Madagasikara tamin’ny 13 Jolay tao amin’ny EPP Bernard Canut, Faravohitra, Antananarivo, izay nampivondrona ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ministeran’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana (MEAH) ary ny UNICEF.
Ny Ministrin’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa, dia nanamafy fa ity fanomezana DLM ity, izay natao ho an’ny sekolim-panjakana, dia hetsika vonjimaika anajanonana ny fiparitahan’ny Covid-19, fa indrindra koa, ho an’ny tanjona lavitr’ezaka izay tafiditra ao anatin’ny ezaky ny (MEAH). Izany no natao dia mba hanamafisana orina ny fametrahana fahazarana tsara mikasika ny fampiasana ny rano , ny fanadiovana ary ny fidiovana eny amin’ireo toeram-pianarana rehetra.
« Raha ny marina, ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony dia iray amin’ireo fomba mahomby indrindra hitandroana ny fahasalamana sy hiarovana ny fifindran’ny aretina marobe, tsy ny Covid-19 irery ihany fa ireo aretin’ny taovam-pisefoana sy ny aretim-pivalanana ihany koa. Amin’ny alàlan’ity famatsiam-bola fanampiny ity, ny Fiaraha-miasa manerantany ho an'ny Fanabeazana dia mikarakara ny fitandroana ny fahasalamana sy izay mahasoa ireo mpianatra, ny mpampianatra, ary ireo mpiasan’ny fanabeazana, » hoy i Michel Saint-Lot, Solotenan’ny UNICEF Madagascar.
« Ny fanampian’ny Fiaraha-miasa manerantany ho an'ny Fanabeazana miaraka amin’ny fanohanan’ny UNICEF no nahafahanay nanolotra ireo DLM hampiasain’ny sekoly miisa 19 000 ireo. Ao anatin’ny sehatra WASH izay manana anjara toerana lehibe amin’ny tanjon’ity tetik’asa ity, ny sekoly tsirairay dia hahazo peta-drindrina maromaro ho fanentanana ny amin’ny fihetsika ara-pahasalamana sy ny fomba fidiovana, miampy savony iray baoritra ary DLM miisa telo amin’ny 20 litatra na iray amin’ny 60 litatra. Ireo fanampiana ireo dia hanamafy orina ny paikady fitadiavam-bahaolana nasiônaly mba hiantohana ny fitohizan’ny fanabeazana amin'ny ho avy antomotr’ezaka, sy antenantenan’ezaka, ary ho an’ny lavitr’ezaka, » hoy ny fanazavana nataon’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Marie Michelle Sahondrarimalala.
Etsy andanin’izany, ho an’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra vory teo dia fotoana iray nankasitrahana ny ezaka nataon’ny sekoly amin’ny fambolena fahazarana tsara eo amin’ny fidiovana io lanonana io. Sekoly 6 ao amin’ny CISCO Antananarivo renivohitra no nomena ny mari-boninahitra « Sekoly naman’ny WASH » mba hankasitrahana sy hanohanana ny zava-bitan’izy ireo teo amin’ny fanatsarana ny fampiroboroboana ny famatsian-drano sy ny fanadiovana ary fidiovana any an-tsekoly.
Resaka mikasika ny fidiovana mandritra ny fadimbolana
Efa tsy fady intsony ny miresaka momba ny fitantanana ny fidiovana amin'ny fadimbolana